Kufuridzira, iyo nzira yekutengesa yenguva yacho | ECommerce nhau
Zvemagetsi zvekutengesa Izvo zvakachinja zvakanyanya nekuda kwekureruka uko vanhu vanogona kupindirana nako, kunyangwe kana vari zviuru zvemamaira zvakasiyana, kana pasina chikonzero chekuzivana pachavo. Uye nekuda kweichi uye pasocial network vakaumba boka revanhu vakadaidzwa infuellers, vane vateveri vakakura kungave nekuda kwehunyanzvi hwavo kana matarenda, asi kazhinji imhaka yekuti vanokwanisa kunzwira tsitsi vamwe vanhu. Uye izvi zvakatinakirei sevatengesi vemakore?
Vano kufurira idzi inzira dzatinogona kuendesa meseji kune vanhu vazhinji. Makambani mazhinji anobhadhara zviuru zvemadhora kune anokurudzira post anoshandisa chigadzirwa chavo. Pane dzimwe nguva apo zvisingatombofaniri kuita kushambadzira kwakananga nezvazvo, nemucherechedzo wedu uchioneka muchinyorwa tichazowana nzira yakananga nevatengi vedu vangangove.
Kana tikasarudza kushandisa rudzi urwu rwekushambadzira, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutsvaga anopesvedzera ane vateveri pinda musika wakanangwa uko bhizinesi redu rakaendeswa. Ngatiyeukei kuti kune ese marudzi, avo vakatsaurirwa kumitambo yemavhidhiyo, mabhaisikopo, hunyanzvi, hunyanzvi, kunyangwe avo vanotsvaga kugovana zvavo zvematongerwo enyika kana zvazvino maonero.
Chinhu chinotevera kutsvaga nzira yekutaura navo uye nekupa chipo, izvi zvinowanzoenderana nenhamba yevateveri vavanayo uye nhanho yechiitiko mune social network Funga nezve kuti kune vanokurudzira vanosarudza kusatora chero mhando yezvipo, asi vazhinji vanozviona semhando yebhizimusi inobatsira iyo inovabvumidza kuti vaenderere mberi nebasa ravo.
Iye zvino zvaunoziva iwo matipi ekutaurirana anokurudzira, zvishandise kukubatsira kwako uye iwe uchaona kuti kutengesa kwako uye kushanya kwako kunowedzera sei zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kufuridzira, iyo nzira yekutengesa yenguva